Maalqabeen Wargeyska The Guardian u Faahfaahiyey Hay’ad uu ku Taageerayo Adeegyada Caafimaadka iyo Waxbarashada Somaliland – somalilandtoday.com
Maalqabeen Wargeyska The Guardian u Faahfaahiyey Hay’ad uu ku Taageerayo Adeegyada Caafimaadka iyo Waxbarashada Somaliland
(SLT-London)-Ismaaciil Axmed oo ah Aasaasaha iyo Mulkiilaha Shirkadda Caalamiga ah ee World Remit, ayaa shaaciyey inuu aasaasay Hay’ad cusub oo taageeri doonta adeegyada Caafimaadka iyo Waxbarashada hoose ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Sidaasna waxa uu Ismaaciil Axmed ku sheegay warbixin uu ka qoray Wargeyska caanka ah ee The Guardian ee ka soo baxa Ingiriiska oo ay soo xigatay Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, waxaanu maalqabeenku xaqiijiyey inuu aasaasay Hay’adda Sahamiye Foundation oo uu kala badh hantidiisa gelin doono tobanka sannadood ee soo socda, waxaanay Hay’addaasi 500 oo Milyan oo Doolar ku saacidi doontaa adeegyada Caafimaad iyo waxbarashada hoose ee aasaasiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Ganacsade Ismaaciil Axmed waxa uu tilmaamay in Hay’adaha dhaqaalaha ee aan ka shaqeynin Somaliland ay caqabad ku tahay fursadihii maalgashi ee ay Jamhuuriyadda Somaliland ka kasban lahayd Caalamka.
Waxa kaloo uu intaas ku daray in dhaqaalaha ay soo ururiyaan Hay’adaha caalamiga ahi qadar aad u yari ka gaadho bulshada reer Somaliland.
Ismaaciil Axmed waxa uu Wargeyska The Guardian u sheegay inay Jamhuuriyadda Somaliland caalamka tusaale wax ku-ool ah ugu noqonayso waxqabsiga iyo isku-tashiga hoosta laga soo bilaabo. Waxaanu ku dooday in Somaliland wax qabasatay iyadoo aan cid kale ka helin taageero.
Ganacsade Ismaaciil waxa uu tilmaamay in Warbaahinta caalamiga ahi ay xoogga saaro waxyaabo khaldan, hase ahaatee waxa uu xusay inay Somaliland tahay qaddiyad dhacdo ahaan guulaysatay.
Wargeyska The Guardian wuxuu Somaliland ku sifeeyey dal madaxbannaanidiisa kala soo noqday Soomaaliya oo ku naaloonaya dawladnimadiisa gaarka ah, isla markaana leh Baarlamaan, Lacag iyo Ciidammadiisa Ammaanka.
Warbixintaasi waxa ay sheegtay Ismaaciil Axmed uu Ingiriiska ku soo galay qaxoontinimo sannadkii 1988kii, markii Somaliland uu ka dhacay dagaalkii, waxaanu Ingiriiska iyo Somaliland ka hirgaliyey sannadkii 2010kii mid ka mid ah shirkadaha farsamooyinka casriga ah u xawila lacagaha.